Painting Gel၊ Poly Gel၊ Builder Gel - NEW COLOR BEAUTY
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ရန် ကြိုဆိုပါသည်၊ win-win အခြေအနေဖြင့် gel polish လုပ်ငန်းတွင် သင်နှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
New Color Beauty Co.,Ltd သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ Gel Polish ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
2010 ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးမြင့် UV Gel Polish ထုတ်ကုန်များ၏ သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ရောင်းချမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျယ်ထုတ်ကုန်များတွင်- အဆင့်သုံးဂျယ်၊ နှစ်ဆင့်ဂျယ်၊ တစ်ဆင့်ဂျယ်၊ Top&Base coat၊ Builder gel၊ Polygel၊ Strengthen gel၊ Painting gel၊ Pure colour gel၊ Platinum gel၊ Transfer gel၊ Embossing gel စသည်ဖြင့်။
အရောင်ပေါင်း 2000 ကျော်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ R&D အဖွဲ့၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်၊ အရောင်များနှင့် ဂျယ်များ ပိုမိုပါဝင်လာပါသည်...
အကောင်းဆုံး ဂျယ်လက်သည်းဆိုးဆေး ပေးသွင်းသူအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အကောင်းမွန်ဆုံးသော သီးသန့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြေရှင်းချက်၊ ထိပ်တန်းအရည်အသွေး Gel၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ကုန်ကျစရိတ်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်း/R&D အဖွဲ့ကို သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ပေးနိုင်သည်
ပေးသွင်းသူ Flash-gel-polish ရွဲ
Nail Art Creating gel ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
UV လက်သည်းဂျယ်လ်ဆိုးဆေး ထုတ်ကုန်များ ၊ အပေါ်နှင့် အောက်ခံကုတ် လက်သည်းဆိုးဆေး၊ ရောင်စုံ လိမ်းဆေး ၊ ကြောင်မျက်လုံးဂျယ် ၊ တောက်ပသော ဂျယ် ၊ ရှမ်မာဂျယ် ၊ လက်သည်း လိမ်းဆေး ၊ လက်သည်းပန်းချီဆွဲဂျယ် စသည်ဖြင့် အပါအဝင် .
လက်သည်းများကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် လက်သည်းများကို ပြုပြင်ရန်အတွက် စိတ်ကြိုက် အရည်အသွေးမြင့် ကော်ဂျယ်လ်ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လက်သည်းတိုးချဲ့ ဂျယ်စက်ရုံမှ ဦးစားပေး လက်သည်းပန်းချီကို ဖန်တီးပါ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် နှစ်သက်ဖွယ်စျေးနှုန်း သီးသန့်လိုဂို စိတ်ကြိုက်အမှတ်တံဆိပ် ပန်းရောင်ဂျယ်ဆေး uv လက်သည်းခွံစက်ရုံမှ မတူညီသော ပန်းရောင်ဂျယ်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လက်သည်းဂျယ်စက်ရုံမှ သီးသန့်/စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော Sheer Gel Polish တစ်ပိုင်းအကြည် ဂျယ်လ်အရောင်များ
သင့်လက်သည်းပန်းချီပစ္စည်းများအတွက် သီးသန့်လိုဂိုထုပ်ပိုးထားသော OEM UV gel စက်ရုံမှ အရည်အသွေးမြင့် Nude gel အရောင် စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသော အလှပြင်ဆိုင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လက်သည်းဆိုးဆေး
ကိုယ်ပိုင်လိုဂို liner အနုပညာဂျယ်ဆေးပန်းချီ လက်သည်းပန်းချီဆွဲဂျယ် OEM လက်သည်းခြေသည်းပန်းချီ OEM မှာယူမှု ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဂျယ်လ်ဆိုးဆေးစက်ရုံမှ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် One step gel polish အနီရောင် စုစည်းမှု ချောမွေ့သော texture သည် အပြိုင်အဆိုင် ကုန်ကျစရိတ် ကောင်းမွန်ပြီး visicosity အပြည့်ဖြင့် manicure လက်သည်းပန်းချီထုတ်ကုန်အတွက် ကာဗာ
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အဆင့်တစ်ဆင့်ဂျယ် အပြည့်အဖုံးခြယ်ပစ္စည်း3In 1 ဂျယ်ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ယှဉ်ပြိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် တရုတ်စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သည်။
လက်သည်းပန်းချီ DIY အတွက် အထူးကောင်းမွန်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်မြင့် 9D Cat Eyes ဂျယ်လီရောင်
ရောင်စုံလက်သည်းကာဗာနှင့် လက်သည်းပုံဆွဲခြင်းအတွက် ကောင်းမွန်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်/ထိပ်တန်းအရည်အသွေး Nail art drawing gel
UV gel Factory မှ သီးသန့်/စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော Nude Color Gel nail Polish သည် လက်သည်းပန်းချီလုပ်ငန်းတွင် ရေပန်းစားသော UV gel Factory
Nebula Color Gel Polish Aurona တောက်ပသော Chameleon တောက်ပသောလက်သည်းဂျယ် ကျက်သရေရှိပြီးကျက်သရေရှိသောလက်သည်းပုံစံ
Glitter Gel Polish Classy glitter အရောင်များ အနီရောင် / sliver / golden / black / green glitter gel လက်သည်းဆိုးဆေး
nail primer/basecoat ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုကြလဲ...
Basecoat gel UV polish ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ဘာလဲ။nail primer/basecoat gel သည် လက်သည်းများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် လက်သည်းများ ပြုတ်ကျခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဖြစ်သည်။လက်သည်းမဆေးခင် primer လိမ်းတာက သာမာန်သဘောပါပဲ...
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေ၊ လမ်းကြောင်းကို လေ့လာခြင်း...
A. လက်သည်းဂျယ်အနုပညာလုပ်ငန်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေနှင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ လက်သည်းဆိုးဆေးသည် အမျိုးသမီးများအတွက် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပြသကာ ကျက်သရေရှိစေမည့် ဖက်ရှင်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။